अध्यात्मिक र आधुनिक शिक्षालाई मिलाएर ज्ञान चक्षु अगाडी बढिरहेको छः प्रिन्सिपल खनाल | KTM Khabar
अध्यात्मिक र आधुनिक शिक्षालाई मिलाएर ज्ञान चक्षु अगाडी बढिरहेको छः प्रिन्सिपल खनाल
२०७४ बैशाख २१ गते ०७:५४ मा प्रकाशित
यसै सन्दर्भमा केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले न्युरो बासबारीको १५० मिटर अगाडी भेटघाट चोकमा रहेको ज्ञान चक्षु इंग्लिस हाई स्कुलका फाउण्डर/प्रिन्सिपल प्रदिप खनालसंग विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
व्यस्तता कस्तो छ सर अहिले ?
अहिले नयाँ सेसनको सुरुवात भईसकेको छ । विद्यार्थीहरुको भर्ना क्रम जारी भएको हुनाले विभिन्न अभिभावहरुको भेटघाट यसले गर्दा पनि व्यस्त नै छौँ ।
धेरैका लागि ज्ञान चक्षु नाम किन रह्यो ? भन्ने कौतुहलता हुन सक्छ, कस्ता विद्यार्थीलाई समेट्छ ? भन्ने कुरा पनि आउँन सक्छ, यी विषयमा कुराकानी गरौँन सर
ज्ञान चक्षु यो अर्थबाट नै कुरा गर्न मन लाग्यो । ज्ञान भन्ने कुरा स्वभाबै रुपमा बुझेको कुरा हो । चक्षु भनेको एउटा संस्कृत शब्द हो । चक्षु भनेको नेत्र अर्थात आखा हो । क्ष भनेको क र स मिलेर बनेको शब्द हो । विशेषत संस्कृत शब्दमा यी दुई लेटरलाई पवित्र शब्दको रुपमा लिइन्छ ।
ज्ञानको भित्रि आखा खोल्ने एउटै नाम के हुन सक्छ त ? भनेर हामीले ज्ञान चक्षु इंग्लिस स्कुलको नाम जुराएका हौँ ।
विद्यालय भनेको विद्याको खानी । जहाँ चौतर्फि विकासका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरु विद्यालयमा सिक्ने गरिन्छ । त्यो समग्र सिकाईलाई एउटै शब्दमा हामीले भन्नु पर्दा अर्थात बुझाउँनु पर्दा ज्ञान चक्षु भन्दा अर्को नाम छैन जस्तो लागेर ज्ञान चक्षु नाम राख्यौ । २०६२ साल देखि यहि अवस्थित छ ।
विद्यार्थीहरुको चौतर्फि विकासका लागि विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा विद्यार्थीले पाउँने आध्यात्मिक कुराहरु पनि ज्ञान चक्षुले दिँदै आईरहेको छ । अहिलेको व्याबसायीक शिक्षा र आध्यात्मिक शिक्षालाई मिलाएर अगाडी बढिरहेको ज्ञान चक्षु विद्यालय भएको हुनाले पनि अहिले सबैको रोजाईमा हाम्रो विद्यालय परेर यत्तिको संख्यामा विद्यार्थीको भर्ना क्रम बढ्दो रुपमा रहेको छ । यसमा हामी हर्षित छौँ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरुको पहुँचमा कसरी ज्ञान चक्षु पुगिरहेको छ ?
विद्यालयमा विभिन्न किसिमका अभिभावकहरु आउने गर्नु हुन्छ । एक दमै न्युन स्तरका अभिभाकहरुले पनि आफ्ना नानी–बाबुहरुलाई पढाउँनु हुन्छ । जहा उच्च घरायिन अभिभाकहरुको नानी–बाबुहरु पनि पढ्न आउँनु हुन्छ तर सबैलाई समेटेर ज्ञान चक्षु स्कुलले लैजान्छ । सबैलाई आफ्नो स्कुल भनेर फिलिङ होस भन्ने हिसाबले विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमद्धारा पनि अभिभावक र विद्यार्थीलाई समेट्दै पनि आईरहेका छौँ । यसपाली विशेषत विद्यालय १२औँ वर्ष अर्थात दिव्य वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा पनि हामीले ज्ञान चक्षुमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीहरुलाई केन्द्रित गरेर पाठ्य पुस्तक निशुल्क गरेका छौँ । जुन कुरा अभिभावकहरुले स्वागत योग्य रुपमा लिनु भएको छ, उत्साह थपिएको छ, खुशि पनि हुनुहुन्छ ।
शायद यो किसिमको अभियान कमै स्कुलहरुमा मैले देख्ने गरेको छु । जुन ज्ञान चक्षु स्कुलमा पाउँने भए र पाइरहेका पनि छन् विद्यार्थीले । यो अभिभावक उन्मुख कार्यक्रम रहेको छ ।
बेला बेलामा विभिन्न कक्षाका अभिभावकहरु पनि बोलाएर विद्यार्थीको विषयमा भन्ने गरेका छौँ ।
ज्ञान चक्षुमा आई सकेपछी विद्यार्थीहरुले के पाउँछन ?
वास्तबमा काठमाडौँमा रहेको यो क्षेत्रमा ज्ञान चक्षु स्कुल आईसके पछि विद्यार्थीले पाउँदैनन् त के ? भने जस्तो लाग्छ । हामीले रात, दिन खटेर विद्यार्थीको हक हितका लागि भोलीको शुनिश्चित राम्रो, सफल भविष्यको लागि विद्यार्थीहरुको हरेक चाहनाहरुलाई सम्वोधन गर्दै चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा विद्यार्थी अग्रपक्तिमा रहुन, ज्ञान चक्षुको विद्यार्थी भने शिर ठाडो बनाउँन सफल हुन भन्ने हिसाबले हामीले अतिरिक्त क्रियाकलाप मार्फत विद्यार्थीहरुको अन्तरनिहित क्षमतालाई प्रष्फुठन गरिरहेका छौँ ।
विश्वमा अहिले धेरै बोलिने भाषा चाईनिज भाषालाई पनि विद्यार्थीहरुलाई पढाई रहेका छौँ ।
ज्ञान चक्षु इंग्लिस हाई स्कुलका फाउण्डर/प्रिन्सिपल प्रदिप खनालसंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानी हेर्नको लागि युटुब लिंकमा जानुहोसः